သတင်း - ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံ မီးအိမ်များနှင့် မီးအိမ်များ မိတ်ဆက်ခြင်းအတွက် လည်ပတ်မှု သတ်မှတ်ချက်များဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များ
ကုမ္ပဏီ၏အရောင်းအပြီးဌာန၏အဆိုအရ၊ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၊ ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ LED မီးချောင်းများ၏ရောင်းအားပြီးနောက်ပြဿနာများသည်အသုံးပြုသူကေဘယ်ကြိုးများမမှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ခြင်းကြောင့်အခြေခံအားဖြင့်ဖြစ်ရသည်။ထို့ကြောင့်၊ ဤတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော LED မီးချောင်းများနှင့် ကေဘယ်ကြိုးများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီ၏ လည်ပတ်မှု သတ်မှတ်ချက်များကို ရှင်းပြပါသည်။
1. ဦးဆောင်ပါဝင်သည့် စက်အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဝါယာကြိုးရွေးချယ်မှု
ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း၊ သြဂုတ်လမှစတင်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော LED မီးချောင်းများနှင့် မီးပုံးမိတ်ဆက်ကိရိယာအားလုံးကို အဆင့်မြှင့်တင်ထားပါသည်။
၎င်းကို လက်စွပ်၏ အပြင်ဘက်လက်စွပ်နှင့် တံဆိပ်ခတ်ထားသော လက်စွပ်အတွင်းပိုင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
မှတ်ချက်- ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော မီးချောင်းများ၏ အဝင်လိုင်းသည် PVC အစွပ် သို့မဟုတ် ရော်ဘာအစွပ်ပါသော ကြိုးတစ်ချောင်းတည်းပါသော ကြိုးကို အသုံးပြုသင့်သည်။single-core ဝါယာကြိုးများအသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ကေဘယ်အစွပ်ကို ဖယ်ထုတ်ပြီး ဝါယာအပေါက်မှတစ်ဆင့် ကြိုးများစွာကို အသုံးပြုခြင်းအား တင်းကြပ်စွာတားမြစ်ထားသည်။ဤအရာကြောင့်ဖြစ်ရသည့် အရည်အသွေးပြဿနာများရှိပါက အာမခံဖြင့် အကျုံးမဝင်ပါ။
မှတ်ချက်- ဝါယာကြိုးသုံးချောင်းကို ချည်နှောင်ရန် တိပ်ကို အသုံးပြုခြင်းသည်လည်း မှားယွင်းပါသည်။
အထူးသတိပေးချက်- အောက်ဖော်ပြပါပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း စျေးကွက်တွင် အပေါက်သုံးပေါက်ရှိသည့် သားရေကွင်းများရှိပါသည်။GB3836 စံသတ်မှတ်ချက်တွင် မိတ်ဆက်ကိရိယာ၏ ရော်ဘာကြိုးသည် အပေါက်တစ်ပေါက်မှ ရော်ဘာကြိုးဖြစ်ရမည် ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ထို့ကြောင့် 3-hole ရော်ဘာကြိုးသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီသောကြောင့် အသုံးမပြုနိုင်ပါ။
2. Compression screw နှင့် internal cable တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်း
မှန်ကန်သောတပ်ဆင်မှုပြီးနောက်၊ သင်သည်အောက်ပါအချက် ၃ ချက်ကိုအာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည်။
1. ကြိုးကို ဆွဲငင်ပြီး အလုံပိတ်မရနိုင်ကြောင်း သေချာစေရန် ဖိသိပ်ထားသောဝက်အူကို တင်းကျပ်ထားရပါမည်။
2. အတွင်းကေဘယ်သည်5မီလီမီတာထက် ပိုသော ရော်ဘာတံဆိပ်ခတ်ကွင်းကို ဖြတ်သန်းပြီးနောက် တပ်ဆင်ရန်အတွက် ပြင်ပအရေပြားကို အခွံခွာသင့်သည်။
3. ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ တံဆိပ်ခတ်ထားသော လက်စွပ်ကို အလိုအလျောက် စွန့်ပစ်ခြင်း သို့မဟုတ် အပေါက်များသော အလုံပိတ်လက်စွပ်ကို အစားထိုးခြင်း ခွင့်မပြုပါ။
တတိယအချက်၊ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းလက်စွပ်ကို မှန်ကန်သောအသုံးပြုမှု
1. ကေဘယ်လ်၏ အပြင်ဘက်အချင်း ≤10mm ဖြစ်သောအခါ၊ တံဆိပ်ခတ်ထားသောလက်စွပ်၏အတွင်းပိုင်းကို မပျက်မစီးထားပါ (ပုံ(၁)တွင်ပြထားသည့်အတိုင်း)။
2. 10mm ရောက်မှ
3. ကေဘယ်၏အပြင်ဘက်အချင်းသည် 13.5 မီလီမီတာထက်ပိုသောအခါ၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကေဘယ်ကိုအစားထိုးခြင်း (သံချပ်ကာကိုချွတ်ခြင်း) သို့မဟုတ် ကူးပြောင်းရန်အတွက် လမ်းဆုံသေတ္တာကိုအသုံးပြုပါ။
အထက်ဖော်ပြပါသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံမီးအိမ်များနှင့် မီးအိမ်များမိတ်ဆက်ခြင်းအတွက် လုပ်ဆောင်ချက်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်။ဤသတ်မှတ်ချက်နှင့်မညီသော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အရည်အသွေးပြဿနာများကို အာမခံဖြင့် အကျုံးဝင်မည်မဟုတ်ပါ။